फिल्मी खबर Archives - Page 36 of 40 - Purbeli News
अब ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा नायिका बन्दै
पत्रकार ऋषि धमलाकी श्रीमती एलिजा गौतम पनि नायिका बन्ने भएकी छिन । धमला पत्नी एलिजाले आफै ले निर्माण गर्न लागेको चलचित्रमा उनि आफै नायिका बनेर आउन लागेकि बताइएको छ । एलिज ले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र को नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । चलचित्रको निर्देशक, नायक र संगीतकारको नाम भने उनले सार्वजनिक गरेकी छिन् । चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउछु’मा सह...
“ए मेरो हजुर-२” का सालिनमान जस्तै देखिने को हुन् यी युवा ? हेर्नुस (भिडियो सहित)
भदौ ४, ईटहरी / एकै अनुहारका संसारमा ७ जना सम्म हुन्छ भन्ने भनाई चलिआएको छ । नेपालि फिल्म लाईनका कलाकारहरुमा पनि केहि यस्ता छन्, जसको अनुहार मिल्न जान्छ । महा-नायकको उपनाम भिरेका राजेश हमाल जस्तै देखिने अर्का कलाकार सितल केसी हुन । यस्तै यतिबेला नया कलाकार संग नया कलाकारको पनि केहि रुपमा अनुहार र जिउडाल मिलेको पाईएको छ । कुनै बेला नेपालि सिने नगरी...
गायक प्रमोद खरेलको नेतृत्वमा १८० घर परिवारलाई राहत वितरण
काठमाण्डौँ ।गायक प्रमोद खरेलको अगुवाईमा झापाको कचन कवलसहित मोरङको हस्तन्दहका बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेका छन् । झापाको कचन कवलका १६० परिवारलाई प्रति परिवार २५ केजी चामल, दाल, नुन, तेलसहित दुई थान झुल र एउटा सोलार टर्च टाईट वितरण गरेका हुन् । यसै गरी मोरङ हस्तन्दहका २० घर परिवारलाई पनि सोही परिमाणमा जिन्सी सामग्री वितरण गरिएको हो । स्थानीय प्रति...
‘ग्याङ्गस्टर ब्लूज’काे सुखद ओपनिङ
शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म 'ग्याङ्गस्टर ब्लूज' ले राम्रो ओपनिङ गरेको छ । निर्माण घोषणाको समयदेखि नै चर्चामा रहेको फिल्मको मल्टिप्लेक्स तथा सिंगल स्कृन दुबैतिरको ओपनिङ सुखद छ । रिलिजको पहिलो दिन काठमाडौंका मल्टिप्लेक्स तथा सिंगल स्कृनका बिहानी शो तथा दिवा शो मा अधिकांश पर्दा हाउसफूल रहे । शुक्रबार फिल्मले ५३ लाखको विजनेस गरेको जानकारीमा आएको...
‘देश खोज्दै जाँदा’ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिवलमा छनौट
सुनसरी / प्रकाश आङदेम्बे निर्देशित फिल्म ‘देश खोज्दै जाँदा’ मस्टर्डसिड अन्तराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिवलमा अफिसियल छनौट भई स्क्रिनिङ हुने भएको छ । उक्त फेस्टिवलमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र नेपाली फिल्म देश खोज्दै जाँदा यही भदौ २८ गतेदेखि नेपालभर प्रदर्शनमा आउँदै छ । अमेरिकाको पेन्सिलभेनियास्थित फिलाडेल्फिया सिटीमा हुने तीन दिने फिल्म फेस्टिवलम...
प्रदर्शनको तयारीमा चलचित्र ‘स्काउट’
चलचित्र अब तिजको अवसर परेर भाद्र ८ गतेदेखि रिलीजमा आउने भएको हो । चलचित्रमा गरिमा पन्त,नबराज श्रेष्ठ, कुशल थापा, मधुकुमार श्रेष्ठ, संजय श्रेष्ठ, रक्षा श्रेष्ठको अभिनय देख्न सकिन्छ । भद्रगोलको अभियान गरेसंगै चर्चा कमाएकी रक्षाले यसै चलचित्रबाट डेब्यु गरेकी हुन् । मधुकुमार श्रेष्ठको प्रस्तुतिमा केदार प्रसाद पराजुली,कृष्ण लामिछाने र इश्वर तिवारीक...
सोनाक्षीसँग भजन सुन्दै बाबा रामदेव !
एजेन्सी । भारतीय योग गुरु रामदेव रियलिटी टिभि शोमा देखिने भएका छन् । रामदेव रियलिटी शो 'ओम शान्ति ओम' मा देखिने भएका हुन् । रामदेवसँग शोमा बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पनि रहनेछिन् । शो लाइफ ओके च्यानलबाट प्रशारण हुनेछ । शोको सुटिङ सोनाक्षी र बाबा रामदेवले मुम्बईको पवई स्थित एक स्टूडियोमा सुरु गरेका छन् । योग गुरु बाबा रामदेव उक्त शोमा प्र...
नेपालमा सुखद व्यापार गरेको वर्ष २०७४ को पहिलो हिट फिल्म “धनपति” अब विदेशका विभिन्न शहरहरुमा पनि प्रदर्शन हुने भएको छ । नेपाल रिलिज अगाडि अमरिकामा प्रदर्शन गरिएको फिल्म “धनपति”ले नेपालबाट प्रदर्शनको दुईदिनमा करोड विजनेश गरेको खबर बाहिर आएको थियो । नेपालमा निकै रुचाइएको फिल्म “धनपति” अब यूकेका विभिन्न शहरहरुमा प्रदर्शन हुने भएको छ । यूकेका सबै शहर...
ईटहरी। नेपालमा फिल्म चलाउन महिना दिन पहिले बाटै ठाउ-ठाउमा विभिन्न खाले कार्यक्रम तथा सामाजिक संजालमा ब्यापक उत्रिने प्रचलन बड्दो छ l यहि क्रममा रिलिजको नजिकै आउदै गरेको “ग्याङ्ग्स्टार ब्लुज” ले पनि यस्तै खाले प्रचार शैलीलाई अगाडि सारेको छ । निर्माता मध्येका एक सरोज न्यौपानेले “सेल्फी विथ ग्याङ्गस्टार ब्लुज” नाम राखेर नया शैलीको प्रचार कार्यलाई ...
सुस्मिताको आत्मआलोचना, उत्सबसँग मागिन माफ
काठमाडौँ । सिने पत्रकार उत्सब रसाईली (रमाईलो छ) लाई सामाजिक संजालमा अपशब्द सहितको गालीगलौज र कुटपिट गर्ने धम्की दिएकी अभिनेत्री सुस्मिता केसीले आत्मआलोचना गर्दै माफी मागेकी छन् । महानगरीय प्रहरी प्रभाग टेकुमा उत्सब रसाईलीले जातीय, लैंगिक हिँसा र कुटपिट गर्ने धम्की दिएकी सुस्मिता विरुद्द निवेदन दिएका थिए । अन्तत: सुस्मिता केसी बिहिबार टेकु पुगेर,...